Wararka - Farqiga udhaxeeya Qolka Nadiifinta Cadaadiska & taban
Farqiga Udhaxeeya Qolka Nadiifinta Cadaadiska & xun
Laga soo bilaabo 2007 ， Airwoods oo u heellan inay siiso xalal hvac dhammaystiran warshadaha kala duwan. Waxaan sidoo kale bixinaa xalka qolka nadiifka ah ee xirfadleyda ah. Iyada oo la adeegsanayo nashqadeeyayaasha guryaha, injineero waqti-buuxa ah iyo maamuleyaal mashruuc u heellan, kooxdeena khabiirrada ahi waxay ka caawinayaan dhinac kasta oo ka mid ah abuurista nadaafadda-laga bilaabo naqshadeynta illaa dhismaha iyo isku imaatinka-si loo siiyo xalal qaabaysan oo loogu talagalay warshado kala duwan. Haddii macaamilku u baahan yahay aag ama heer aad u sarreeya; qolka nadiifinta cadaadiska hawada ama nadiifinta cadaadiska hawada ee xun, waxaan ku fiicanahay la shaqeynta qeexitaanka macaamiisha, si aan u soo saarno xalal ka badan filashooyinka, oo aan aheyn miisaaniyad.
Farqiga udhaxeeya qolka nadiifinta cadaadiska wanaagsan & kan xun
Haddii aad tixgelinayso qol nadiif ah, waxaad u maleyneysaa inaad iskudayeyso inaad ururiso macluumaad badan intii suurtagal ah. Nooca musqusha ee kugu habboon adiga? Maxay yihiin heerarka warshadeed ee ay tahay inaad buuxiso? Xagee ayuu tagayaa qolkaaga nadiifinta? Waxaad helaysaa sawirka. Hagaag, hal qayb oo macluumaad ah oo waxtar kuu yeelan kara ayaa ah fahamka farqiga u dhexeeya nadiifinta cadaadiska hawada ee togan iyo kuwa taban. Sidaad u badan tahay inaad horeyba u ogayd, qulqulka hawadu wuxuu door libaax leh ka ciyaarayaa in nadaafaddaadu nadiif noqoto, laakiin wixii aadan ogeyn ayaa ah in cadaadiska hawadu sidoo kale saameyn weyn ku yeelan karo. Marka waa kan sharraxaad jaban ee cadaadis kasta oo hawo wanaagsan iyo mid xunba.
Waa maxay qolka nadiifinta cadaadiska wanaagsan?
Taas macnaheedu waa in cadaadiska hawadu ee gudaha qolkaaga nadiifka ahi uu ka weyn yahay deegaanka ku xeeran. Tan waxaa lagu gaaraa iyadoo la adeegsanayo nidaamka HVAC, oo lagu gaaro iyadoo lagu shubayo hawo nadiif ah, sifeeysan qolka nadiifka, guud ahaan saqafka.
Cadaadis togan ayaa loo isticmaalaa qolalka nadiifka ah halka mudnaanta ay ka ilaalinayso wixii jeermis ah ama wasakhda ah ee qolka nadiifka ah. Haddii ay dhacdo in wax daadanayeen, ama albaab la furay, hawo nadiif ah ayaa qasbanaan doonta in laga soo saaro qolka nadiifinta, halkii laga dhigi lahaa hawo aan la sifeynin oo loo oggolaado qolka nadiifka. Tani waxay u shaqaysaa xoogaa si la mid ah kala qaadista biibiilaha; markaad furto buufin, ama aad soo shaacbixiso, hawadu way soo degaysaa maxaa yeelay cadaadiska hawada ee buufinku wuu ka sarreeyaa cadaadiska hawada deegaanka.
Musqulaha cadaadiska wanaagsan waxaa loo isticmaalaa ugu horeyn warshadaha halka nadaafada qolka nadiifintu ay ka shaqeyso si sheyga loo ilaaliyo inuu u ahaado mid nadiif ah kana badbaadi kara waxyaabaha, sida warshadaha microelectronic halkaasoo xitaa qeybta ugu yar ay dhaawici karto sharafta microchips-ka la soo saarayo.
Waa maxay qolka nadiifinta cadaadiska xun?
Marka la barbardhigo qolka nadiifinta cadaadiska hawada, qolka nadiifinta cadaadiska hawada wuxuu hayaa heer cadaadis hawleed oo ka hooseeya kan qolka ku xeeran. Xaaladdan waxaa lagu gaadhay iyada oo la adeegsanayo nidaamka HVAC oo si joogto ah u shaandheeya hawada qolka, iyadoo hawo nadiif ah ku shubaysa qolka u dhow dabaqa isla markaana dib uga nuugaysa meel u dhow saqafka.
Cadaadiska hawada ee xun waxaa loo isticmaalaa qolalka nadiifka ah ee ujeedadu tahay in laga ilaaliyo wixii wasakh ah ee suurtogalka ah ee ka baxsanaya qolka nadiifka. Daaqadaha iyo albaabada waa in si buuxda loo xirxiraa, oo cadaadis hoose yeeshaa, hawada banaanka qolka waxay u badan tahay inay ku qulquleyso, halkii ay ka bixi lahayd. Ka fikir sida koob madhan oo aad ku riday baaldi biyo ah. Haddii aad ku riixdo koobka biyaha sare ee biyaha, biyaha ayaa ku qulqulaya koobka, maxaa yeelay waxay leeyihiin cadaadis ka hooseeya biyaha. Qolka nadiifinta cadaadiska xun waa sida koobka madhan halkan.
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labada ayaa ah in nidaamyada xakamaynta cadaadiska togan ay ilaalinayaan geeddi-socodka halka taban ay ilaalinayaan qofka .Qalalka nadiifinta cadaadiska hawada waxaa loo isticmaalaa warshadaha soo saara alaabada dawooyinka, samee baaritaanka bayoolaji, iyo sidoo kale isbitaalada si loo karantiilo bukaanka halista ah ee halista ah. Hawo kasta oo qolka ka baxaysa waa inay marka hore ka soo baxaan miiraha, iyadoo la hubinayo in wax sun ah oo ka baxsan kara aysan ka baxsan karin.
Isku ekaanshaha u dhexeeya cadaadiska wanaagsan iyo qolka nadiifinta cadaadiska xun?
In kasta oo shaqooyinka cadaadiska wanaagsan iyo musqulaha cadaadiska xun ay aad u kala geddisan yihiin, haddana waxay iska shabahaan qaar ka mid ah labada. Tusaale ahaan, labada noocba waxay u baahan yihiin adeegsiga:
1. Miirayaasha HEPA ee xoogga leh, oo, ay weheliyaan qaybaha kale ee nidaamka HVAC, waxay u baahan yihiin dayactir taxaddar leh
2. Is-xiritaanka albaabada iyo daaqadaha sida saxda ah loo xiray, derbiyada, saqafyada, iyo sagxadaha si loo fududeeyo dayactirka heerarka cadaadiska hawada ee habboon
3. Isbeddello badan oo hawada ah saacaddiiba si loo hubiyo tayada hawada iyo xaaladaha cadaadiska
4. Qolalka Ante-ga ee loogu talagalay shaqaalaha inay u beddelaan dharka difaaca ee loo baahan yahay oo ay keenaan qalabka iyo qalabka lagama maarmaanka ah
5. Nidaamyada kormeerka cadaadiska gudaha
Haddii aad hayso wax su'aalo ah oo dheeraad ah oo ku saabsan nadiifinta iyo nadiifinta nadiifinta musqulaha, ama haddii aad raadineyso inaad iibsato qol nadiif ah oo ganacsigaaga ah, la xiriir Airwoods maanta! Waxaan nahay dukaankaaga hal-joogsi ah si aan u helno xalka ugu habboon. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan awoodayada nadaafadda ama si aad ugala hadasho qeexitaankaaga nadaafadda mid ka mid ah khubaradayada, nala soo xiriir ama codso tixraac maanta.